Ingonyama ap.-Indlu entle ye-2-Zaton - I-Airbnb
Ingonyama ap.-Indlu entle ye-2-Zaton
I-Apartment ikwindlu endala yosapho, ecaleni kolwandle lweZaton bay entle. Inombono kwigadi yasemediterrenean enemithi ye-orenji kunye nezinye izityalo ezininzi ezahlukeneyo. Kuphela i-20 m ukuya elwandle eyenza le ndlu ibe yinto ekhethekileyo yokukhetha iholide ekhululekile, kwaye kwangaxeshanye kuphela iikhilomitha ezili-10 ukusuka kwiziko laseDubrovnik kunye neendawo zayo zokuzonwabisa. Kwakhona, maninzi amathuba eholide esebenzayo, njengokubheqa, ukukhwela ibhayisekile, ukuhamba ngesikhephe okanye ukufumana imbali.
Kukho i-terrace ngaselwandle ene-sunbeds, iitafile kunye nezitulo, sinikezela ngokusetyenziswa kwasimahla kwesikhephe sokubheqa, i-kayak kunye neebhayisekile ezi-2. Indawo yokupaka yasimahla phambi kwendlu, okanye i-100 m kude.
Ekubeni sihlala apha, sidibana neendwendwe zethu yonke imihla kwaye sikulungele ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso.
IZaton yidolophana engekude eDubrovnik. Yathiywa ngebhayi yobuhle obungenakunqandwa apho izihandiba zaseDubrovnik zakha izindlu zazo zasehlotyeni. Ukuseta umva ukusuka elunxwemeni i-2 km, i-Zaton ibonelela ngolwandle olukhuselekileyo olufudumeleyo, ngelixa umkhenkethi ophuhliswe kakuhle enika iziqinisekiso zokuba uya kuzonwabisa.
Zininzi iindawo zokutyela ezilungileyo ezibonelela ngezinto ezikhethekileyo zalapha ekhaya, ivenkile enkulu kunye neposi.
Kwakhona, kukho ithuba lokuqesha i-kayak, okanye ukuya kuhambo lwephenyane olulungelelanisiweyo. Kukho igadi entle nephakathi yokuvuselela ngokutsha (arboretum) eTrsteno, kumgama oziikhilomitha ezisi-8 kuphela ukusuka eZaton.
Kukho iibhasi eziya eDubrovnik okanye kwezinye iindawo kwindawo ngamaxesha angama-20 ngosuku. Ukufika kwisikhululo seenqwelomoya ungasebenzisa ibhasi okanye iteksi.
4.68 · Izimvo eziyi-85